मेरी प्रिय उनी ! | काव्यालय
मेरी प्रिय उनी ! | विचार | काव्यालय-Kavyalaya | गंगाराम गौतम
पुर्णिमाको जस्तै चकमन्न उज्यालो रात, गड्याङ्ग-गुडुङ्ग चर्किरहेको आकाश अनि पानीका थोपाहरूले तप-तप आवाज दिएर झरेका बलेनीहरू ! भित्तामा टाँगिएको घडीको टिकटिक आवाज कानमा गुञ्जिन्छ ! मध्य रातीको समय अनि झल्यास्स देखेको सपना, खै के-के देखेर हो कुन्नि प्यास पो लागेछ ! टेबलमा रहेको करुवाबाट पानीको एक घुट्को लगाउँदै सोच्छु…! “आज मैले सपनामा देखेकी उनी चाहिँ होलिन् को?”
मेरो मनलाई चञ्चल अनि दिमागलाई सोचमग्न बनाउने ! वास्तविकताको यस दुनियाँभन्दा धेरै पर… खै कता-कता…! सपनीमै आएर मात्रै पनि मलाई सोच्न बाध्य बनाउने उनी अझ भनौँ न यो मध्यरातको एकान्तमा मलाई सोचमग्न बनाएर रमाउन दिने मेरी प्रिय उनी !!!
आजकलका हरेक एकान्तहरूमा मैले उनै अपरिचितलाई सम्झन्छु! नदेखेको, नभेटेको, नबोलेको अझ भनौं न चिन्दै नचिनेकी उनी ! कतै उनी मैले मनै-मनले बुनेकी मेरी जीवनसाथी त होइनन्…? हरेक भीडहरूमा रमाए पनि एकान्तमा म उनै अपरिचितलाई सम्झिरहेछु !
आशा राख्दछु… मेरी प्रिय उनी, तिमी मबाट भौतिक रूपमा धेरै टाढा वा नजिक जहाँ भएपनि कुशल नै रहनु ! तिमीले पनि त मैले जस्तै मनमा विभिन्न कुराहरू खेलाउँदै भविष्यका मिठा-मिठा कल्पनाहरू बुन्दछ्यौ होला ! कतै एकान्तमा आफै हराउँदै त कतै भीडमा मेरो बारेमा सोचेर…,सुख-दुःख, चोट-व्यथा, राम-रमाइलो, यस्तै-त्यस्तै संघर्ष गर्दैछ्यौ होला है ! मैले पनि तिमीसँग मिलेर एउटा छुट्टै संसार बनाउने कोसिसमा लागिरहेको छु ! तिमी पनि त त्यही ध्याउन्नमा छ्यौ होला नि ! हतार नगर- तिमीले जस्तै मैले पनि भिन्न-भिन्न जिम्मेवारी बोकेर एउटा सानो र रमाइलो संसार बनाउने संघर्ष गर्दैछु ! तिमीलाई लिन आउँदा एउटा ठूलो तामझाम र रथ-घोडा लिएर आउँछु त म भन्दिनँ तर तिम्रो लागि स्वयम्बरमा आउँदा तिमीले सोचेको जस्तै राजकुमार बनेर आउने कोसिस गरिरहेको छु !
छाडिदेऊ तिमीले पनि बनावटी व्यवहार, देखावटी मुस्कान, सम्मोहित आँखा, नागबेली रेशम, लचकदार कम्मर अनि यस्तै-त्यस्तै दिव्य- दृष्टिहरू ! तिमी केवल स्वाभिमानी मनका फराकिला पंखहरू फिजाएर बस्नु अनि मैले पनि त्यस्तै स्वाभिमानी मन लिएर आउनेछु तिमीलाई भेट्न, तिम्रै अगाडि !
तिमीलाई मनको दैलोमा धुमधामसँग स्वागत गर्नेछु मैले पनि ! कतै तिम्रा तोडिएका दिलहरू, कतै मेरा खोसिएका मुटुका टुक्राहरू, अनि कतै तिम्रा विगतहरू त कतै मेरा अतितहरू ! यी सबै कुराहरू त केवल केही रमाइला त केही नरमाइला कहानी अनि भविष्य बुझ्न सक्ने ज्ञान मात्र हुनेछन् ! जुन दिन तिमी र म भएर हामी हुनेछौँ नि त्यो दिनदेखि नै हामी एक-अर्कामा परिपुरक भएर बाँच्नेछौँ ! ए मेरी उनी, हामी सँगै मिलेर एउटा अर्को नयाँ सपना कोरौँला !
कतै म लड्न खोज्दा तिमी साहारा बनिदिनु ! कहिलेकाहीँ तिम्रो मुहारमा मलिन भावहरू आउँदा त्यही मलिनताको भावनाहरूबाट मुस्कान ल्याउन सकूँ ! सधैँ-सधैँ म सहि नहुँदा तिमीले नै मेरा गलत बाटाहरू मोडिदिनु ! तिम्रा हरेक इच्छा तथा महत्वकांक्षा पूरा गरिदिन्छु त म भन्दिनँ तर तिमीलाई तिम्रो गन्तव्यको अन्तिम पाइलासम्म पनि सँगै साथ दिइराखौँला ! तिमीलाई बिझाउनै नदिने आँखाको नानी जस्तै अनि मुकुट पहिरिएर सिंहासनमा बसेकी रानी जस्तै बनाएर राख्छु पनि म भन्दिनँ । तर, तिमीलाई छलेर वा ढाँटेर तिम्रो विश्वास तोड्ने पनि छैन, प्रण गर्दछु प्रिय !
तिमीसँग कहिलेकाहीँ रिसाउँदा, झर्किँदा टाढा हुने कोसिस नगर्नु ! मेरा हरेक गलत कार्यहरूलाई गलत नै साबित गर्न लागिरहनु ! तिमीसँग धेरै ठूला-ठूला आशाहरू त राख्ने छैन तर जीवनका हरेक इच्छा र महत्वकांक्षा तिमीसँगै बाँड्न पाऊँ !
तिमी आत्मा सफा बनाएर आऊ । म पनि अविश्वासका पर्दाहरू हटाएर पर्खिरहनेछु ! तिम्रा पीडाहरूमा मल्हम लगाउन सकूँ, तिम्रो मुहारको मुस्कानमा मेरो पनि उपस्थिति जनाउन सकूँ , तिमीसँगको प्रेमको बन्धनमा एउटा स्वतन्त्र चरा जस्तै उड्न सकूँ, तिम्रो त्यो प्रेमको पिँजडामा पनि रम्न सकूँ, तिमीलाई दिल खोलेरै माया गर्न सकूँ, तिम्रो मायाको गहिराइमा डुब्न सकूँ, अनि तिमीलाई पनि त्यही मायाको विश्वास दिलाउन सकूँ ! तिमीसँग साँचो प्रेममा रम्न सकूँ । तिमीलाई आफ्नो जीवनको प्रिय पात्र बनाएर अनि तिम्रो जीवनको सुख-दुःखको सहयात्री बनेर हरेक पलमा साथ दिन सकूँ । तिम्रो न्यानो मायासँगै तिम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न सकूँ…!
तिमीसँगको साथमा त मैले ठूला-ठूला सपनाहरू पनि देखिसकेको छु ! तिमीसँग मिलेर धेरै टाढासम्मको यात्रा गर्नु छ मलाई ! तिम्रो र मेरो गन्तव्य त्यो दूर बस्ती जहाँ पुग्न तिम्रो र मेरो सहयात्राको आवश्यकता पर्दछ र त्यही एक अर्काका परिपूरक सहयात्री बनेर त्यो दूरको बस्तीमा पुग्नेछौँ हामी !
आजको समाजले भनेको जस्तै तिमीले र मैले विवाहपछि आ-आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न पाउँदैनौ रे ! यो समाजको सोचाइलाई पुरै उल्ट्याउने कोसिस गर्नेछौ हामी ! समाजको परम्परागत कुरीतिलाई कानुन बनाएर अन्यायको आडमा बसेकाहरूकै माझमा ती अपराधका चिच्याहटहरू अनि अत्याचारका बीभत्स घटनाहरूलाई निर्मुल गर्न तिमीसँगको साथमा लड्न तयार रहनेछु म पनि !
तिमी तिम्रा पूरा नभएका अनि म मेरा पूरा नभएका रहरहरू सँगै मिलेर पूरा गरौँला ! तिम्रो र मेरो बीचमा केवल प्रेम नै प्रेम छरौँला, विश्वास नै विश्वास भरौँला ! हाम्रो निश्चल प्रेममा न त कुनै सम्झौता हुनेछ न त कुनै अविश्वास ! सारा संसारलाई साक्षी राखेर मैले तिमीसँग प्रेम गर्नेछु ! मैले जस्तै तिमीले पनि मेरो प्रेमको आस्थामा संसारलाई नै साक्षी राखेर विजय हासिल गरिदिनु !
तिमीलाई प्रेममा भ्रम पार्ने कोसिस होइन पूरै साँचो प्रेमको विश्वास दिलाउने छु ! तिम्रा भावनाहरू अनि मेरा भावनाहरूलाई एउटै जीवनको रथयात्रामा प्रवेश गराउँला ! तिम्रा वाचाहरू अनि मेरा वाचाहरू, तिम्रा आशाहरू अनि मेरा आशाहरू कहिल्यै अञ्जान अनि निराश पार्ने छैनौँ ! प्रण गर्नेछौँ हामी !
तिमीले सोचेको जस्तै परिपक्क भएर म छिट्टै तिम्रो अगाडी आउनेछु ! तिमी पनि आफैमा स्वाभिमानी भएर बस्नु ! धेरै हतार त मलाई पनि छैन, तिमीले पनि चाहिने जति पुरै समय लगाएर मेरै लागी तयार हुनु ! म तिमीलाई भेट्न छिट्टै आउने छु प्रिय उनी…!!!